आर्थिक मन्दीको पूर्वसंकेत कि कृत्रिम संकट ? - Karobar National Economic Daily
आर्थिक मन्दीको पूर्वसंकेत कि कृत्रिम संकट ?
query_builderFebruary 14, 2017 9:42 AM supervisor_account गजेन्द्र बुढाथोकी visibility901
यदि प्रचलित सिद्धान्तहरूलाई मान्ने हो भने अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । विकास वित्त परिचालनमा सरकार कमजोर सावित भएको छ । राजस्व उठाएर ढुकुटीमा थन्क्याउने, तर खर्चै नगर्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिले सरकारको खातामा करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । यसरी बचाएर राखेको पैसा आन्तरिक वा बाह्य ऋणको ब्याज तिर्ने सरकारको नीति देखिन्छ । यसको बहुपक्षीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ ।
बैंकहरू यतिखेर ऋण प्रवाह नै गर्न नसक्ने अवस्था (क्रेडिट क्रन्च) मा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने यसलाई ऋण, खुद पुँजी र निक्षेप अनुपात (क्रेडिट– कोर क्यापिटल एन्ड डिपोजिट –सीसीडी) रेसियो बढाउने हतियार मात्र भएको भन्दै अहिलेको अवस्थालाई निकै हलुका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर देशको एक मात्र पुँजीबजारमा परिरहेको छ । गत साउन ३ गते १८८१ अंकमा पुगेको नेप्से सूचक अहिले १२४८ मा झरेको छ, विगत एक महिनाभित्रै नेप्से २२९ अंकले झरिसकेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा लगातार गिरावट आउने क्रम रोकिएको छैन ।
यसले बजार पुँजीकरण पनि एक महिनामै २ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । बजार पुँजीकरण भनेको सेयर बजारमा कारोबारका लागि सूचीकृत भएका सबै कम्पनीको कुल सेयरको हालको बजार मूल्य हो । सबै कम्पनीको सबै सूचीकृत सेयरको नियमित कारोबार नहुने भए पनि बजार लगातार तल झर्दै जाँदा आमलगानीकर्ताले करोडौं रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् ।
सिद्धान्ततः बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर र सेयर बजारबीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले साधारण बचतमा ब्याजदर बढाएको अवस्था छैन । अल्पकालीन तरलता खिच्नका लागि बैंकहरूले आवधिक निक्षेप (कल डिपोजिट) मा उच्च ब्याजदर बढाएजस्तो देखिए पनि साधारण बचतकर्ताको ब्याजदर १ देखि ३ प्रतिशतमै सीमित छ ।
त्यसैले यही कारणले नै सेयर बजार खस्केको हो भन्न सकिने अवस्था छैन । हुन त राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले हकप्रद सेयरका कारण दोस्रो बजारमा प्रभाव देखिएको ठोकुवा नै गरिसके (जानकारहरू भन्छन्— हकप्रदमा लगाम कसेर मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकको यो भनाइ बाहिर ल्याइएको हो) ।
सेयर बजारमा देखिएको गिरावटलाई अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड सबैले किन चुपचाप हेरिरहेका छन् ? बुझिनसक्नु भएको छ ।विगत ६ महिनामा बैंकिङ प्रणालीबाट अचानक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ हराएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) का रूपमा राख्नुपर्ने रकमबाहेक आफ्नो कोष (भल्ट) मा बढी रकम हुँदा केन्द्रीय बैंकको खातामा निब्र्याजी रूपमा राख्ने रकम गत असारको तुलनामा मंसिर मसान्तसम्म १५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घटेको छ, यो रकम पुस मसान्तसम्म करिब २० अर्ब घटेको हुन सक्ने आँकलन बैंकरहरूको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकको निब्र्याजी खातामा बैंकहरूको करिब १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी छ, त्यो गत साउनमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । गत वर्ष अत्यधिक तरलताको अवस्था कायम रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक गरी करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट खिचेको थियो । यसमध्ये केही रकम राष्ट्र बैंकले पुनः बजारमा प्रवाह गर्नका लागि रिपो जारी गरे पनि बैंकरहरूले त्यसप्रति चासो देखाएका छैनन् ।
अन्तरबैंक ब्याजदर पनि अहिले संकुचित अवस्थामा छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको संकटमाथि केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यो नेपालको वित्तीय प्रणालीका कारण अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने महामन्दीको पूर्वसंकेत पनि हुन सक्छ वा राष्ट्र बैंकको कमजोर भूमिकामा बैंकरहरूले खेल्न खोजेको नयाँ चित–पटको खेल पनि हुन सक्छ ।
भनिरहनु पर्दैन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय क्षमता कमजोर छ । केन्द्रीय बैंकका कदमहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं तात्कालिक र कामचलाउ (एडहक) निर्णयहरूबाटै देशको मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूको जागिरे मानसिकताले देशमा पटक–पटक वित्तीय संकटका संकेतहरू दोहोरिने गरेका छन् । बैंकरहरू राष्ट्र बैंकसँग किन दुस्मनी मोल्ने ? किन तीतो सम्बन्ध बनाउने ? भन्ने हीनभावले ग्रस्त हुँदा केन्द्रीय बैंकको अक्षमताको सिकार देशको वित्तीय प्रणाली बन्दै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका आन्द्रिय पेस्बिटेरो, फेबियो बार्टोन, सौरो मोकेटीसहितका अर्थशास्त्रीहरूले गरेको अध्ययनले ऋण संकटले हाँकेको महामन्दीको बहुपक्षीय असरहरू लामो समयसम्म अर्थतन्त्रमा कायम रहने देखाएको छ ।
यसले गर्दा व्यापार धराशायी हुने, लगानीजन्य खर्च संकुचित हुने र बेरोजगारी दर उच्च रूपमा वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ । हामीकहाँ यसका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
यो अध्ययनमा प्रयोग गरिएका तीनमध्ये दोस्रो सूचक लगानीजन्य खर्च नेपालका अति नै कमजोर भइसकेको विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले देखाउँछ । विश्व बैंकले अध्ययन गर्दा नेपालमा अधिक तरलताको अवस्था थियो, त्यो तरलताको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई हम्मेहम्मे परिसकेको अवस्था थियो ।
यस्तो परिवेशका बाबजुद लगानी परिचालन हुन सकिरहेको थिएन । अहिले स्थिति ठ्याक्कै उल्टो छ । बैंकरहरूसँग ठूलो त के, मध्यमखालको कर्जा प्रवाहका लागि समेत पर्याप्त पैसा छैन । बैंकहरूबाट पुँजी प्रवाहित नहुँदा निजी क्षेत्रका ठूला–साना परियोजना विस्तारका काम रोकिएका छन् ।
बैंकरहरूले सजिलोका लागि ओभरड्राफ्टमा परिचालित गरेको कर्जाको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा फर्केको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहजै भन्छन्– “नोट छापेर अहिलेको समस्या समस्या हुँदैन ।” उसो भए छापेर चलनचल्तीमा लगेको पैसाचाहिँ गयो कहाँ ?
अर्को सूचक, व्यापारको आयतन हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै असर नै परेको देखिँदैन । विगत ६ महिनामा आयात उल्टै ६४ प्रतिशतले बढेको छ । तर, यो अनुपात आउँदा दिनमा घट्ने बैंकरहरूले बताएका छन् ।
किनकि व्यापारका लागि थप नयाँ लगानी प्रवाह भएको छैन । विशेष गरी आउँदा दिनमा सवारी साधनको आयात ह्वात्तै घट्ने संकेत अहिले रोकिएको कर्जा प्रवाहको अवस्थाले देखाएको छ ।
सवारी साधनको आयात घट्दा त्यसले नै हाँकेको भन्सार र अन्तःशुल्क राजस्वमा कमी आउनेछ । त्यसै पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर विकासतर्फको खर्च नै परिचालित गर्न नसकेको सरकारका लागि राजस्वमा हुने कमी अर्को थप बहाना हुनेछ ।
तेस्रो तर महत्वपूर्ण सूचक रोजगारीका पाटोमा भने सरकारले कुनै टाउको दुखाइरहनै पर्दैन । किनकि गल्फेश्वर महादेवले देशको बेरोजगारी व्यवस्थापन गरिदिइरहेका छन् । तर, यो पनि सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूको आत्मरतिमात्र हो ।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउनेबित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आन्तरिक रोजगारीमा पनि पर्छ नै । देशमा हरेक वर्ष थपिने साढे ५ लाख नयाँ श्रमशक्तिमध्ये ५ लाख बिदेसिए पनि ५० हजारले त कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक श्रमबजारमा रोजगारी पाउँदै आएका थिए ।
विगत केही वर्षदेखि निजी क्षेत्रबाट थपिइरहेका नयाँ होटल र केही नयाँ उद्योगले आन्तरिक श्रमबजारलाई चलायमान पार्ने अपेक्षाका बीच तिनको परियोजना विस्तार नै रोकियो भने नयाँ रोजगारी सिर्जनाको आशामा तुसारापात हुने निश्चितप्रायः छ ।
त्यतिमात्र होइन, अहिलेकै अवस्था लम्बिँदै गयो भने हाल निर्माणाधीन केही जलविद्युत् आयोजनासमेत चालू पुँजीको अभावमा अब केही समयपछि ठप्प हुनेछन् । यो वित्तबजारमा आतंक सिर्जना गराउने प्रक्षेपण होइन, सम्भावित लक्षणका आधारमा गरिएको अनुमान हो ।
यद्यपि, हाम्रो अर्थतन्त्र विश्वका कुनै पनि प्रचलित आर्थिक सिद्धान्त वा वादमा नचलेको हुँदा युरोप र अमेरिकाको ‘क्रेडिट क्रन्च’ तथा सन् २००८ को विश्व महामन्दीपछिको विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा परेको असरका आधारमा गरिएका अध्ययनका निष्कर्ष यहाँ फेल खान सक्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका मौद्रिक अधिकारीहरू नयाँ वित्तीय संकटबाट देश बचाउन सकेको भन्दै सरकारबाट पुरस्कृत पनि हुन सक्छन् । आमनागरिकका लागि भने यो प्रश्न सधंै खड्किइरहनेछ— देशमा आउन सक्ने वित्तीय संकट वास्तविक तरलता कमीले उत्पन्न भएको हो कि वित्त बजारका केही खेलाडीको मिलेमतोमा जन्माइएको कृत्रिम संकट हो ?
भारतमा विमौद्रीकरण गरिनु, यता ‘क्रेडिट क्रन्च’ हुनु तथा प्रहरीले ठूल्ठूलो अनुपातका तस्करीको सुन समाउनुबीच बाख्रा हराउनु र स्याल कराउनुको संयोग मात्र मिलेको हो कि अरू नै केही छ, त्यो निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमै ।